Nkesa Network akpaaka Intelligent Ọnụ Products
N'èzí agụụ circuit emebi, ibu mgba ọkụ, reclosing
Ime ụlọ agụụ circuit emebi & mgba ọkụ
Iba isi unit & ịmafe ngwaọrụ
Ọkara na elu voltaji mgba ọkụ kabinet set
Ọkara na elu voltaji n'echebe na àmụmà arrester
Igwe anaghị agba nchara banding tie
Ekwentị: +86 577 6266 0666
-esi ọhụrụ amụọ na pụrụ iche na-enye.
TXGN6-12 inflatable mgba ọkụ kabinet
Tụkwasịnụ Ikike: TENPRO
Mesikwuru egbochi ihe ngwaahịa
Customizable elu elu
Inflatable mgba ọkụ kabinet
The mgba ọkụ kabinet bụ modular unit mode, nke nwere ike ikpokọta dị ka dị iche iche ojiji, na-emi esịnede ofu nkeji na nhụbàràama nkeji izute mkpa nke na-agbanwe ojiji nke kọmpat mgba ọkụ kabinet dị iche iche substations.
TXGN6-12 inflatable mgba ọkụ kabinet bụ a kpam kpam akara usoro. All nke ya ndụ components na switches na-nchọ na igwe anaghị agba nchara shei, dum mgba ọkụ na ngwaọrụ na-adịghị emetụta mpụga gburugburu ebe obibi na ọnọdụ, n'ihi ya, ọ nwere ike hụ ọrụ pụrụ ịdabere na nchedo, na-aghọta na atụmatụ nke mmezi-free. Site na-ahọpụta nhụbàràama busbar, ọ bụla Nchikota nwere ike isi nweta full modularization. Extended busbar nchekwa mkpuchi na echebe ka hụ na elu pụrụ ịdabere na nchebe. TXGN6-12 ụdị inflatable mgba ọkụ kabinet nwere ike nye TV akpaaka ngwọta, na-etolite echiche nke nwere ọgụgụ isi mgba ọkụ, na iwelata ibu nke ubi echichi na debugging.
TXGN6-12 ụdị inflatable mgba ọkụ kabinet bụ ndị na-abụghị nhụbàràama ọkọlọtọ nhazi nhụbàràama ọkọlọtọ nhazi. N'ihi na nke Nchikota full modul na ọkara modul na ya expansibility, o nwere pụrụ nnọọ iche mgbanwe.
TXGN6-12 ụdị inflatable mgba ọkụ implements GB ọkọlọtọ.
The imewe ndụ n'okpuru ime ụlọ ọnọdụ (20 ℃) ​​karịa afọ 30.
Product nlereanya na pụtara
gosiri na ugbu a
Inflatable ụdị mgba ọkụ kabinet
TXGN6-12 usoro inflatable kabinet SF6 gas dị ka aak emenyụ na mkpuchi ọkara.
Mgba ọkụ kabinet a n'ụzọ zuru ezu-akàrà, n'ụzọ zuru ezu gwara mmanụ; busbar, ịgbanwee na ndụ akụkụ na-ntukwasi-nchọ na igwe anaghị agba nchara shei
-Ulo jupụtara SF6 gas nke 1.4bar, na nchedo ọkwa bụ ruo IP67 :. The dum mgba ọkụ ngwaọrụ bụ kpam kpam free si mmetụta nke mpụga gburugburu ebe obibi na ọnọdụ. Ọbụna n'okpuru gabigara ókè ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka transience mmiri, mgba ọkụ nwere ike ejikwara ejikari na ngwaahịa nwere ike ịbụ mmezi-free maka ndụ.
The mgba ọkụ kabinet nwere a zuru okè "ise mgbochi" n'ijikọta ngwaọrụ, nke nwere ike kpamkpam kpochapụ na ndị na ngwá malfunction ụmụ mmadụ kpatara njehie.
All mgba ọkụ cabinets nwere pụrụ ịdabere na mma mgbali enyemaka ọwa, ọbụna n'ọnọdụ ndị gabigara ókè iji hụ na nchedo nke rụọ.
Mgba ọkụ kabinet ekewa ofu unit Nchikota na nhụbàràama unit Nchikota.
Mgba ọkụ cabinets na-na-fronted na nke akara, na pụkwara arụnyere na ọnọdụ dị iche iche iji nweta akuku tinyekwa ma ọ bụ n'akụkụ mgbasa
The size nke kabinet bụ adaba iji wụnye na pụrụ ịbụ kwesịrị ekwesị n'ihi na obere ohere na ndị ogbenye na gburugburu ebe obibi na ọnọdụ.
Mgba ọkụ kabinet nwere ike ahazi electric, ime akara na nchọpụta ngwaọrụ dị ka dị iche iche mkpa nke ọrụ.
C modul ibu mgba ọkụ
F modul jikọtara ọkụ na ngwá
agụụ mgba ọkụ
Nweghị / grounding mgba ọkụ
agụụ (circuit) emebi
Power ugboro idi voltaji (otu / agbajikwa)
Àmụmà ugboro idi voltaji
Gosiri mechiri emechi-akaghị agbasa ugbu a
Gosiri cable Nchaji na-agbasa ugbu a
Gosiri Egbubikwala Ndinam ugbu a (Ọnụ ọgụgụ kasị elu)
Gosiri elu idi ugbu a
Gosiri obere oge idi ugbu a
Gosiri Egbubikwala agbasa ugbu a
Gosiri nyefe ugbu a
Oke ugbu a nke fuuz
Previous: TXGN66-12 (Z) ofu nchọ ịmafe ngwaọrụ elu voltaji ịmafe ngwaọrụ
Osote: TXGNH-12 Box-ụdị ofu metal-nchọ ịmafe ngwaọrụ elu voltaji ịmafe ngwaọrụ
Hexafluoride High voltaji Ring Main Unit
High voltaji Ring Main Unit
Eṅomi Abb-Type Ring Main Unit
Eṅomi Schneider-Type Ring Main Unit
Ime ụlọ Ring Main Unit Nweghị Gbanye
TZN63A (TVS1) -24 Indoor elu voltaji agụụ CI ...
TZW10-12 N'èzí elu voltaji agụụ circuit br ...
TG38-12 usoro Indoor AC elu voltaji iche ...
TSB igwe anaghị agba nchara banding tie mkpọchi (isi c ...
TCHZ-12 usoro AC elu voltaji akpaka reclosers
TJN15-12 Indoor elu voltaji grounding mgba ọkụ